Momba anay - Reyoung Corp.
Tavoahangy Flip Cap
Tavoahangy plastika plastika
Tavoahangy paompy fanosotra
Tavoahangy rojo vy
Famafazana zavona tsara
Andiany fikarakarana am-bava
Reyoung Corp.dia mpanamboatra matihanina fantsom-plastika sy tavoahangy PET / HEPE ho an'ny fampiharana isan-karazany ao anatin'izany ny kosmetika, fikarakarana manokana, hatsaran-tarehy, sakafo, fanafody ary indostria. Noraisinay ny teknolojia vaovao tamin'ny fitaovana PCR / Sugarcane / PLA izay sariaka eco sy biodegradable.
Ny orinasa dia voamarin'i ISO9001: 2015 Fanamafisana ny rafitra fitantanana kalitao & ISO14001: 2015Fanamarinana ny rafitra fitantanana tontolo iainana. Isika izao dia ahitana ny famolavolana vokatra, ny famolavolana ny bobongolo, ny fivoahana, ny lohateny, ny fitsofana, ny tsindrona, ny fanonta ary ny fanontana lamba amin'ny lamba landy, ny fitomboana amin'ny stamp, ny UV sy ny hosodoko, ny plating, ny fanoratana, ny fanangonana ary ny fandefasana ny fandefasana.
Amin'izao fotoana izao dia efa nangataka patanty maro izahay ary manana ny ekipa mpamolavola iraisam-pirenena miavaka. Miankina amin'ny tombotsoan'ny olona manan-talenta, ny tanjaka ara-teknika matihanina ary ny fomba fitantanana maoderina, dia nahomby tamin'ny fanatanterahana ny fanaraha-maso avy amina marika malaza be eran'izao tontolo izao izahay ary nahazo ny fitokisana sy fiderana avy amin'ny mpanjifanay.
R&Ddia zava-dehibe amintsika. Izahay dia namolavola haitao tena marina sy ara-dalàna mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatray. Ny mpikaroka mpamorona antsika dia manao asa mahafinaritra ihany koa amin'ny famolavolana vokatra marefo vaovao bebe kokoa. Ny vokatray dia afaka manome fahafaham-po ny fitakiana fonosana, amin'ny lamaody sy kalitao. Hiteraka toe-javatra mandresy eo aminao sy izahay.
Taorian'ny ezaka maharitra 15 taona, miaraka amin'ny kalitao azo antoka sy ny vidin'ny fifaninanana, dia lasa iray amin'ireo mpanamboatra kaontenera plastika mahay indrindra ao Shina izahay. Ny vokatray dia aondrana any amin'ireo firenena sy faritra eran'izao tontolo izao, toa an'i Eropa, Amerika Avaratra ary Azia atsimo atsinanana miaraka amin'ny tahan'ny fivarotana eo an-toerana any ivelany 70% ny 30%.
Ankoatr'izay, manolotra fonosana tokana ho an'ny mpanjifanay rehetra izahay. Manana zavamaniry fanamboarana roa hafa izahay ho an'ny fonosana baoritra ary koa serivisy fanontana. Horaisina tsara ianao raha te hahalala bebe kokoa amin'ny fitsidihana ny tranonkalantsika na fifandraisana aminay mivantana.
RM1-1203, CBC Mansion, Road Wanyue, Yuhang Dist. Hangzhou, Sina.